Pagespeed na Google Webmasters: WWW ma obu WWW
WWW or No WWW na Pagespeed
Satọde, 26 Juun 2010 Tọzdee, Disemba 5, 2013 Douglas Karr
Kemgbe ọnwa ole na ole, ana m arụ ọrụ iji melite oge peeji nke saịtị m. Ana m eme nke a iji nyere aka melite ahụmịhe onye ọrụ n'ozuzu yana iji nyere njikarịcha njin ọchụchọ m. Edeela m ụfọdụ usoro m jiri rụọ ya na-agba ọsọ WordPress, ma agbanweela m ụlọ ọrụ nnabata (ka Mgbasa ozi) ma mejuputa ya S3 nke Amazon ọrụ maka ịhazi ihe oyiyi m. M na-dị nnọọ arụnyere WP Super Cache na nkwanye nke enyi, Adam Obere.
Ọ na-arụ ọrụ. Dabere na Njikwa Nchọta Google, oge peeji m na-agbadata agbadatala na ndụmọdụ Google Webmaster:
Google na-ahapụ gị ịtọ ndabara maka ma saịtị gị ga-aga ozugbo na www.domain ma ọ bụ na-enweghị www. Nke a bụ ebe ihe na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ na m na-edebe oge peeji m na-enweghị www, ha dị mma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na m lelee oge ibe oge na www, ha dị egwu:
Ihe ndozi n'ezie, bụ na ngwugwu nnabata m na-agakarị www peeji. N'ihi nnukwu ọdịiche dị na oge nzaghachi Google, edebewo m nhazi saịtị ahụ na adreesị na-abụghị www n'ime Google Search Console. M wepụkwara redirect koodu na mgbọrọgwụ nke saịtị m na faịlụ .htaccess nke na-ebigharị arịrịọ na-abụghị www na ngalaba www.
Amaghị m na ọ bụla nke a na-enyere aka ma ọ bụ na-ewute m, mana ọ dị ka ihe ezi uche dị na ya. Ọ bụla echiche?
Tags: ihu peejiibe peejiwww
ATTN: Ndị na-emepe Ngwa Ngwaọrụ
Jun 27, 2010 na 8:20 AM
Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ! M na-emegharị ebe nrụọrụ weebụ m mgbe niile na nsụgharị WWW maka nkwekọ na inye Google otu URL ka ọ kọwaa ya ka ọ ghara kewaa ọkwa. M na-eche na ọ na-ese ka mma na ihe ziri ezi na anya ịmanye WWW version na-egosipụta. Otú ọ dị, data gị na-eme ka arụmụka na-akpali akpali iji chegharịa nke a. M ga-enwe ọchịchọ ịchọ ịhụ nsonaazụ SEO gị oge ụfọdụ. M ga-ahụ ya n'anya ma ọ bụrụ na ị ga-ekerịta ha ebe a mgbe ụfọdụ nyochachara.
Jun 27, 2010 na 9:18 AM
Odd… ugbu a ka m na-agụ ọkwa ọzọ ma na-eche ihe kpatara ibe ahụ ji na-ewe ogologo oge. Ọ dị ka cdn.js-kit ihe na-ewere ruo mgbe ebighị ebi. Dị ka grafụ gị si dị, ọ dị ka ihe ọ bụla ị mere na-enyere aka!
Jun 27, 2010 na 11:03 AM
Nke ahụ bụ ihe m kwuru, Joshua! Ahụla m ụfọdụ ka ha jidesiri ọrụ ha ike ma nwee ike ikwu ihe n'oge na-adịghị anya.
Jun 27, 2010 na 11:05 AM
Obi ga-adị m ụtọ ịkọrọ stats ọ bụla Michael! Ọzọkwa, n'agbanyeghị, onye ọ bụla na-aga na adreesị "www" yabụ ejighị m n'aka ihe kpatara bọọlụ Google jiri nwayọ ịnweta ụzọ ahụ. Na-eche ma ọ bụrụ na ọ bụ aha nameserver na nnabata m ma ọ bụ ntọala apache ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Yahoo! na-atụ aro iji WWW. iji nye ohere maka ndị na-abụghị www. static ngalaba ngalaba:
Ọ bụrụ na ngalaba gị bụ http://www.example.org, I nwere ike nọrọ n'ụlọ gị static components na static.example.org. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịtọbela kuki na ngalaba ọkwa kachasị elu.org.org na-abụghị http://www.example.org, mgbe ahụ arịrịọ niile ka static.example.org ga-agụnye kuki ndị ahụ. N'okwu a, ịnwere ike ịzụta ngalaba ọhụrụ ọhụụ, nọrọ n'ụlọ ọrụ gị wee nwee ike ịnwe kuki a. Yahoo! eji yimg.com, YouTube na-eji ytimg.com, Amazon na-eji images-amazon.com na na.
Kemgbe m gụrụ nke a, eso m http://www….because Yahoo! mara ezigbo mma.
Nke a bụ nke mbụ m nụrụ maka nsogbu ọsọ ọsọ ọ bụla www. Onye ọ bụla ọzọ nwere otu ahụmịhe?
Ọzọkwa, saịtị niile bụ isi na-eji http://www.: Amazon, Google, Yahoo !, Bing, wdg. Would ga-eche na ha agaghị eji ya ma ọ bụrụ na ọ kwụsịlata saịtị ha.
Jun 30, 2010 na 8:08 AM
M na-amanye na-enweghị “WWW” ya mere m na ngalaba bụ nanị aha m. M n'ezie nwalere ya ọsọ ọsọ, ma oge obula ị gara na saịtị m ị nweta "WWW" ahụ.
M lere ya anya site na njirimara ngosipụta. Echere m maka azụmahịa - "WWW" na-etinye echiche nke ịdabere na ya.
Enwere m ọnwụnwa iji nwalee ọsọ m. Achọpụtala m na saịtị m ibu mara mma ngwa ngwa na mgbe niile. Ọdịda?
Feb 25, 2011 na 1:14 PM
Nke ahụ na-akpali mmụọ. Na ederede ọzọ, ị chere na ọ kachasị mma ịgụnye www ma ọ bụ na ọ bụghị, na ọ bụ ihe na-emebi ikwe ka ha abụọ mee?